Tag: wicitaanada ficilka | Martech Zone
Tag: wicitaanada ficilka
Kordhi Ku-beddelashadaada Adoo la dagaallamaya Kuwani 5 dilaayaasha dilaya
Talaado, Agoosto 21, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Haddii ay jirto hal shirkad oo khadka tooska ah ka socota oo la socota oo cabira heerarka beddelaadda ee ku saabsan wax kasta oo isbeddel ah, waa dadka ku jira Formstack! Waxaan nahay saaxiibo, taageerayaal, iyo xulufooyin kooxda sanado badan, mana dhaawaceyso inay ku sugan yihiin halkan Indianapolis! Xogtaan cusub iyo xogtan cusub ee laga helay Foomka 'Formstack' waxay tilmaameysaa 5 arrimood oo laga yaabo inay si xun u waxyeeleynayaan heerarka aad u beddeleyso: Diiwaangelinta Warbaahinta Bulshada - waxay u gutaan si ka wanaagsan foomamka diiwaangelinta maran. Xaqiiqdii, 87%
Maxay Yihiin 5ta Nooc ee Ugu Badan ee Wicitaanada-Ficilka?
Talaado, July 31, 2018 Douglas Karr
Waxaan had iyo jeer ku siineynaa talo bixin ku saabsan CTAs si joogto ah halkan maxaa yeelay aad ayey muhiim ugu yihiin guusha. Waxaa laga yaabaa inaad isku daydo inaad u maleyneyso inaadan u baahnayn - in rajadu ay qaadi doonto tallaabada xigta maxaa yeelay waxyaabahaagu aad ayuu u wanaagsan yahay. Waxaan jeclaan lahaa inay sidaas ku dhacdo laakiin, badanaa badanaa, dadku way bixi doonaan. Way ka tagi karaan dhiirigalin iyo inay wax yar barteen… laakiin wali way tagayaan. Waxaan wadaagnay waxyaabaha aasaasiga ah
Sidaad u maleyn karto, waxaan helnaa codsiyo badan oo aan ku daabacno faahfaahinta sawirada Martech Zone. Waa sababta aan u wadaagno faahfaahinta toddobaad kasta. Waxaan sidoo kale iska indhatirnaa codsiyada markaan helno faahfaahinta oo si fudud u muujineysa in shirkaddu aysan sameynin maalgashi weyn si ay u dhisto qaab muuqaal ah oo qiimo leh. Markii aan ka dhagaystay xogtan ka socota Brian Downard, oo ah Aasaasaha Istaraatiijiyadaha Ganacsi ee ELIV8, waan aqoonsaday tan iyo markii aan wadaagnay shaqooyin kale oo ay qabteen. Tani
Sida loo Dhiso loona Koro Liiska Emailkaaga
Jimcaha, Sebtember 4, 2015 Axad, Sebtembar 6, 2015 Douglas Karr
Brian Downard oo ka tirsan Eliv8 ayaa shaqo kale oo cajiib ah ka qabtay xogtan iyo liistadiisa hubinta suuqgeynta ee internetka (soo dejiso) halkaasoo uu ku jiro liiskan hubinta ee ku saabsan koritaanka liiska emaylkaaga. Waxaan ka shaqeyneynay liistadayada e-mayl, waxaanan ku dari doonaa qaar ka mid ah qaababkan: Abuur Bogag Soo-Degitaan - Waxaan aaminsanahay in bog kasta uu yahay bog soo degitaan ah… marka su'aashu waxay tahay ma leedahay ikhtiyaar lagu doorto bog kasta boggaaga adoo adeegsanaya desktop ama mobile?
Iskuday Kaararka Youtube si aad u Kordhiso La Xiriirka Daawadeyaasha
Monday, June 8, 2015 Monday, June 8, 2015 Douglas Karr
Iyada oo leh aragtiyo badan iyo raadinta sida ay yihiin Youtube, waxay umuuqataa inay jirto fursad luntay iyadoo aan lahayn habab wanaagsan oo beddelaad ah oo ku duugan fiidiyowyada Youtube. Youtube waxay soo saartay kaararka si ay u keento is dhexgal dheeri ah halka soo saaraha fiidiyowga uu hadda ku dhex dhejin karo wicitaanno fiican-wax-qabad ku saabsan shey-ka-fiidiyowga fiidiyowyadooda. Hal qoraal - Kaararka ma shaqeeyaan marka lagu daro isweydaarsiga CTA ee hadda laga heli karo Youtube. Waa kuwan Muuqaalka guud